Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ကိုရွှေဧည့်သည်
စိန် ယူ တွေ့တာ ကြွက်ကြီးလား ဘာကြီးတုန်း၊ သရဲလား လန့်လိုက်တာဟယ်..အဲ့လိုဟာကြီးကို ညဘက်ကြီးတင်ရလားအေ....လန့်ထှာ...ကလူကလူ...ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်ပြန်ခေါ်လိုက်ရတယ်...တော်..ပြန်ပီ..ဟွန်း
သရဲ ပိုစ့်နဲ့ တူနေလို့။
ဘာများလဲလို့... ကြွက်တဲ့.. ဟင်း
ကောင်းမှကောင်း စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးတတ်တယ်။ သရဲလို့ထင်နေတာ။ brovo!!!!!!!!!!!!!!!!
ရေးထားတာက ကိုယ့်ရှေ့မှာပဲ မားမား မတ်မတ်ကြီး လာရပ်တဲ့ လူထွားကြီးလိုပဲ :P
ဒါပေမယ့် ညီမလည်း ကြွက်ကြောက်တာပဲ :D
အမလေး ကြွက် ကိုများ ဒီလောက်တောင် ကြောက်တယ် ဟိ
ကြွက် က ဖန်ဆီ လက်ပတ်လေး ကြိုက်သကို..
နောက် ဖန်ဆီ အင်္ကျီဝတ်မထားနဲ့... ချွတ်ယူသွားလိမ့်မယ်.. အဟိ
7 January 2010 at 04:12
ဖတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ရေနှစ်နေပြီဆိုကတည်းက သိလိုက်တယ် ကြွက်ဆိုတာ ငါ့ကွ အဟေးးးးးးးးးး ကြွက်သားကြွတ်ကြွတ်ကြော် ပူပူလေးးးးးးး ရမယ် ပူပူလေးးးးးးးးးးးးး
ကြွက် က ဖန်ဇီလေးတွေ ကြိုက်တယ်ဆိုတော့
ကိုဖိုးစိန်တို့ က လက်ပတ်ကို ပတ်တတ်တာပဲရှိတာ
လျှော်ဖို့ မရှိတော့ ဟိုက် အနံလေးက သင်းတော့ ဝင်အုပ်ပြီးပေါ့ အဟိ
ဂျီးများပြီး လက်ပတ်လေးက ဟောင်ထွက်နေလို့ ဝင်ဆွဲတာနေမှာ တော်ပြီကျန်တာမပြောတော့ဘူးတော်ကြာဖဲ့တယ်ဖြစ်နေဦးမယ် အဟတ်
ငါ ကွ ...
နောက်ဆုံး ဘာလဲ ဆိုတာ
စကိုးလ်ဗား ဆွဲပြီး ကျော်ဖတ်လိုက်တာ ..
ကြွက်ဖြူ လေး လက်ဆောင် ပေးလိုက်မယ် ..
( ကြွက်မဲ မပေးပါဘူးး ) ..>>
မထသ မှ မထသ ပဲး)
ကြွက်များ ဟယ် ..ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတာကို ဟိ
7 January 2010 at 05:04
ဘာများလဲလို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဖတ်လိုက်တာ....
ကြွက်ကြီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဖြစ်နေတာကိုးးးးးးး ၂ကီလိုစာလောက်ရှိတဲ့ လက်ပတ်ကြိုးတွေ ချီသွားပါ ချီသွားပါ......
ကြွက်လဲကြောက် ကြောင်လဲကြောက်ခွေးလဲကြောက်. ပိုးဟ်ပ်တော့မကြောက်။
နှတ်ခမ်းချွန်ချွန်ဆိုကတည်းက သိနေပြီ။ ကြွက်လားလို့.. အောက်ဆုံးလဲရောက်ရော..တကယ်ကြွက်ပါဘဲ။:D
ကြွက်တော့ မကြောက်ဘူးဗျ၊ ဒါပေမယ့် ကြွက်ဖြူရော ကြွက်မဲရော အကုန်ရွံတယ် ..
ဟ ဟ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျို့
အပြန်ကျ လက်ဆောင်ထည့်ပေးစရာ စဉ်းစားမိပြီ
ကြွက်က...ကြောက်စရာ မလိုဘူး...ကြော်စားရင် အရမ်းကောင်းတာ...။
9 January 2010 at 05:47
Nay Chin Nu Thit said...
My lovely pet is Rat ,, I had 10 rats lately, now just 1 left. They are so cute and so smart. I dont like mouse. Just rat, big rat cutest evet